हराएका आत्माहरु प्रति परमेश्वरको करुणा
द्वारा लिखित : जैक पूनेन कोटिहरू : घर भगवानलाई चिन्ने चेलाहरू आत्मा भरिएको जीवन
योना ३:१ मा लेखिएको छ "अनि दोस्रो पल्ट परमप्रभुको यसो भन्ने वचन योनाकहाँ आयो"। परमेश्वरको महिमा होस् किनकि हामी एक पल्ट असफल भए पनि उहाँले हामीलाई दोस्रो मौका दिनुहुन्छ। योनाको पुस्तकबाट हाम्रो लागी दिइएको महान् सन्देशहरु मध्ये यो एउटा हो। के तपाई परमेश्वरको काममा असफल हुनुभएको छ? परमेश्वरले तपाईलाई अर्को मौका दिन चाहनुहुन्छ। के तपाईले परमेश्वरको कामलाई दोस्रो पल्ट पनि असफल तुल्याउनुभएको छ? उहाँले तपाइलाई तेस्रो मौका दिनुहुनेछ। उहाँ केवल दोस्रो मौका दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न ‍- किनकि हामी मध्ये प्रायले त्यस दोस्रो मौकालाई धेरै, धेरै पहिल्यै गुमाइसक्यौ। उहाँ अर्को मौकाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाई जति नै पटक असफल हुनुभएपनि! परमेश्वरले तपाईलाई अहिल्यै पनि पन:स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई पुरा हृदयले पश्चाताप गर्नुहुन्छ भने, तपाईलाई उहाँको सेवाकाई पुरा गर्नलाई सक्षम बनाउन सक्नुहुन्छ।
नीनवे शहरको हरेक ठाउँमा त्यो शहर ४० दिनमा नष्ट हुँदैछ भन्ने सन्देश घोषणा गर्दै हिँड्न उनलाई तीन दिन लाग्यो। आश्चर्यपूर्वक, नीनवेका मानिसहरुले तुरुन्तै पश्चाताप गरे। यो संसारको इतिहासमा भएको महान र तुरुन्तै भएको पुन:जागृति थियो। मलाई यहाँ प्रोत्साहित गर्ने एउटा कुरा यो छ कि नीनवे जस्तो दुष्ट शहरले पश्चाताप गर्दा पनि, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि केहि वर्ष पछि, त्यो शहर यत्ति दुष्ट हुनेछ कि उहाँले त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्नेछ। तर परमेश्वरले हरेकलाई अहिले जस्तो छ, त्यसअनुसारले व्यवहार गर्नुहुन्छ - उनिहरु पहिल्यै कस्तो थिए वा भविष्यमा कस्तो हुनेछन् भनि होइन। उहाँको नाम "म हुँ" हो, "म थिएँ", वा "म हुँनेछु" होइन। परमेश्वर हामी भन्दा बढि दयालु हुनुहुन्छ।
जब परमेश्वरले नीनवेलाई दया देखाउनुभयो, तब कुनै व्यक्तिले योना खुसी भए होला भनि सोच्न सक्छ, तर उनि थिएनन्। र योनालाई एउटा पाठ सिकाउनको लागी, परमेश्वरले एउटा बोटलाई उब्जाउनुभयो जुन उनको टाउको माथि माथि पुग्थ्यो। योना त्यस बोटलाई देखेर धेरै खुसी थिए। तर अर्को दिन परमेश्वरले एउटा कीरालाई त्यो बोट खान दिनुभएको कारणले, त्यो ओइलियो। योना फेरी पनि धेरै रिसाए किनकी घामले उनलाई पोलिरहेको थियो र उनले भने, "मेरो निम्ति जिउनुभन्दा मर्नै असल छ।" 'तब परमप्रभुले भन्नुभयो : "तिमीले त्यस कुभिण्डोलाई टिठाएका छौ, जसका निम्ति न तिमीले मेहनत गर्यो, न तिमीले त्यसलाई बढायौ; जो एक रातमा हुन आयो, र एकै रातमा नष्ट भयो; तब के मचाहीँ त्यस ठूलो शहर नीनवेलाई नछोडूँ, जसमा दाहिने हात र देब्रे हात छुट्याउन नसक्ने एक लाख बीस हजारभन्दा बढी मानिसहरु छन्, अनि धेरै गाईबस्तुहरु पनि छन्?"' (योना ४:१०,११)।
योना ४:११ को यस पदमा हामी - पुरानो नियमको अरु पदहरुभन्दा बढी - हराएका आत्माहरुका लागी परमेश्वरको अद्भुत करुणालाई देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले संसारलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो ताकि कोहि पनि नष्ट नहोस्। योनाले केहि कारणले परमेश्वरसँग यो कुरामा सङ्गति गर्न सकेनन्। आज पनि त्यहाँ धेरै यस्ता प्रचारकहरु हुनुहुन्छ जसले योनाले जस्तै पुनजागृति देखेका छन् र प्रचार पनि गर्छन्, तर योनाले जस्तै परमेश्वरको करुणाले भरपूर हृदयसँग सङ्गति गर्न सक्दैनन्। यस्ता प्रचारकले परमेश्वरले उनिहरुसँग चाहनुभएको जस्तो सेवाकाईलाई पूरा गर्न सक्दैनन्। तपाईले प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ र मानिसहरुले त्यस प्रचारको कारणले मुक्ति पनि पाउन सक्छन्; र अन्तमा, योना जस्तै, तपाईको पनि परमेश्वरसँग कुनै पनि सङ्गति नहून सक्छ। एक सही सुसमाचार प्रचारको सेवाकाईको उचित आधार परमेश्वरको हृदयसँग सङ्गति हुनु हो। ज्योति नहुनेहरुको लागी परमेश्वरको धेरै करुणा छ। बाइबलले बताउछ कि परमेश्वर हरेक मानिसले पश्चाताप गरेको, मुक्ति पाएको र सत्यको ज्ञानमा आएको चाहनुहुन्छ। उहाँ त्यसको लालसा गर्नुहुन्छ। जति जति हामी परमेश्वरको हृदयसँग सङ्गतिमा आउँछौ, त्यति नै हामीले उहाँको बोझलाई साझा गर्छौँ। यदि परमेश्वरले तपाईलाई सुसमाचार प्रचारक हुन बोलाउनुभएको छ भने, उहाँले तपाईलाई हराएका आत्माहरुको निम्ति तृष्णा (करुणा) दिनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईलाई शिक्षक बन्न बोलाउनुभएको छ भने, उहाँले तपाईलाई ति विश्वासीहरुको निम्ति करुणा दिनुहुन्छ जो अन्धो र धोकामा परेका छन्। जो विजयको जिवनमा प्रवेश गरिरहेका छैनन्। यदि हामीले आफ्नो सेवाकाई एक प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्नु छ भने, उहाँको करुणालाई साझा गर्नलाई परमेश्वरको हृदयसँगको सहभागिता जरुरी छ।